ဖခင် ကျော်ရဲအောင် ရဲ့ မွေးနေ့မှာ မွေးနေ့ဆုတောင်း ပေးလိုက်တဲ့ မှုံနံ့သာကျော်ရဲအောင်.........! - သတင်းရွာ
ဖခင် ကျော်ရဲအောင် ရဲ့ မွေးနေ့မှာ မွေးနေ့ဆုတောင်း ပေးလိုက်တဲ့ မှုံနံ့သာကျော်ရဲအောင်………!
နိုင်ငံကျော် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ကျော်ရဲအောင်ရဲ့သမီးလေး မှုံနံ့သာ ကျော်ရဲအောင်ဟာ ဆိုရင် ဖခင်လိုပဲ အနုပညာဝါသနာပါသူလေးပါ။ သူမက ပညာရေးကို ဦးစားပေးနေရတာကြောင့်ရံဖန်ရံခါမှသာ အနုပညာအလုပ်ကိုလုပ်ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါမှာတော့ မှုံနံ့သာက ဖခင် နိုင်ငံကျော် မင်းသားကြီး အကယ်ဒမီ ကျော်ရဲအောင် ရဲ့ မွေးနေ့မှာ မွေးနေ့ဆုတောင်း ပေးထားတဲ့ အကြောင်းကိုချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
မှုံနံ့သာကျော်ရဲအောင်က အနုပညာလောကနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တာကြောင့်သူမနဲ့စိမ်းမနေတော့ပါဘူး ။ ငယ်ငယ်လေးတည်းက ဖခင်ရူတင်တွေမှာလိုက်ပါခဲ့ဖူးတဲ့သူမက ဆယ်လီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာလည်းပထမဆုံးပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖူးသူပါ။ သူမက photo model လုပ်ရတာလည်း ဝါသနာပါသူလေးပါတဲ့။
ဒီတစ်ခါမှာတော့ သူမက ဖခင် ကျော်ရဲအောင် ရဲ့ မွေးနေ့မှာ ” Happy birthday daddy i love you♥️” ဆိုပြီးမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးထားပါတယ်။အနုပညာရှင်များစွာ တို့ကလည်း မှုံနံ့သာ ရဲ့ Post အောက်မှာ မွေးနေ့ဆုတောင်း ပေးထားကြပါတယ်။
မှုံနံ့သာကျော်ရဲအောင်ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့မိသားစု ပုံရိပ်ကလေး
သရုပ်ဆောင် ကျော်ရဲအောင်ရဲ့သမီးလေး မှုံနံ့သာကျော်ရဲအောင် ကဖခင်အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးထားတဲ့ အကြောင်း ကို ပရိသတ်ကြီး တွေ့မြင်ရလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးကလည်း ဖခင်ဖြစ်သူကျော်ရဲအောင်ကို အားပေးသလို သမီးလေးမှုံနံ့သာကိုလည်း ချစ်ပေးကြပါဦးနော်။
နိုငျငံကြျော ရုပျရှငျသရုပျဆောငျ အကယျဒမီ ကြျောရဲအောငျရဲ့သမီးလေး မှုံနံ့သာ ကြျောရဲအောငျဟာ ဆိုရငျ ဖခငျလိုပဲ အနုပညာဝါသနာပါသူလေးပါ။ သူမက ပညာရေးကို ဦးစားပေးနရေတာကွောငျ့ရံဖနျရံခါမှသာ အနုပညာအလုပျကိုလုပျရတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီတဈခါမှာတော့ မှုံနံ့သာက ဖခငျ နိုငျငံကြျော မငျးသားကွီး အကယျဒမီ ကြျောရဲအောငျ ရဲ့ မှေးနမှေ့ာ မှေးနဆေု့တောငျး ပေးထားတဲ့ အကွောငျးကိုခဈြပရိသတျတှအေတှကျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
မှုံနံ့သာကြျောရဲအောငျက အနုပညာလောကနဲ့ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈတာကွောငျ့သူမနဲ့စိမျးမနတေော့ပါဘူး ။ ငယျငယျလေးတညျးက ဖခငျရူတငျတှမှောလိုကျပါခဲ့ဖူးတဲ့သူမက ဆယျလီရုပျရှငျဇာတျကားမှာလညျးပထမဆုံးပါဝငျသရုပျဆောငျဖူးသူပါ။ သူမက photo model လုပျရတာလညျး ဝါသနာပါသူလေးပါတဲ့။
ဒီတဈခါမှာတော့ သူမက ဖခငျ ကြျောရဲအောငျ ရဲ့ မှေးနမှေ့ာ ” Happy birthday daddy i love you♥️” ဆိုပွီးမှေးနဆေု့တောငျးပေးထားပါတယျ။အနုပညာရှငျမြားစှာ တို့ကလညျး မှုံနံ့သာ ရဲ့ Post အောကျမှာ မှေးနဆေု့တောငျး ပေးထားကွပါတယျ။
မှုံနံ့သာကြျောရဲအောငျရဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့မိသားစု ပုံရိပျကလေး
သရုပျဆောငျ ကြျောရဲအောငျရဲ့သမီးလေး မှုံနံ့သာကြျောရဲအောငျ ကဖခငျအတှကျ မှေးနဆေု့တောငျးပေးထားတဲ့ အကွောငျး ကို ပရိသတျကွီး တှမွေ့ငျရလောကျပွီ ထငျပါတယျ။ ပရိသတျကွီးကလညျး ဖခငျဖွဈသူကြျောရဲအောငျကို အားပေးသလို သမီးလေးမှုံနံ့သာကိုလညျး ခဈြပေးကွပါဦးနျော။